Baaritaano/tijaabooyin - 1177 Vårdguiden
Undersökningar/prover - somaliska
Raajada naasaha (mammografi) - Baaritaanka naasaha
Mammografi - somaliska
Mammografi waa baaritaanka naasaha ah. Baadhitaanku wuxuu muujin karaa haddii aad qabtid kansarka naasaha ama aad leedahey halis aad ku qaadeyso. Iyadoo la isticmaalaayo raajada naasaha, ayaa kansarka naasaha la ogaan karaa goor hore lana daaweyn karaa. Raajada naasahu wax kharash ah ma aha.
Tijaabada unugyada ee ilmo galeenka
Cellprov från livmodern - somaliska
Tijaabada unugyada ee ilmo galeenka waxa laga soo qaadaa siilka. Waa tijaabo muujinaysa haddii ay ilmo galeenkaaga wax iska bedeleen, taas oo isku bedeli karta cudurka kansarka. Tijaabada unugyadu waxay muujin kartaa haddii xilli hore wax isbedeleen. Markaas ayaad wakhti hore heli doontaa daaweyn sax ah, hadii loo baahdo. Waxba kuma kharash gareynayso inaad dhiibto tijaabada unugyada.
Baaritaanka PSA ee qanjirka shahwada ragga sameeya (prostata)
Blodprov: PSA - somaliska
Tijaabada PSA-du waa tijaabo dhiiga oo muujineysa haddii ay wax qanjidhka shahwada ragga iska bedeleen. Waxa jira isbeddello noocan oo kale ah oo aan khatar aheyn iyo kuwa keeni kara kansarka ku dhaca qanjirka shahwada ragga sameeya. Iyadoo la isticmaalaayo tijaabada PSA ayaa dhakhtarku uu ogaan karaa haddii aad u baahato in laguu sameyso baadhitaano dheeraad ah ama daaweyn.